Ii-FAQs | Wuxi Zuoyou Knitting Iimpahla Co, Ltd.
Ngaba ilogo yenkampani yethu ingashicilelwa kwimveliso?
Ewe kunjalo.Zonke iimveliso zinokuhlaziywa zize zilungiswe.
Sineqela elizimeleyo lophando kunye nophuhliso kunye neqela loyilo, isitayile semveliso, ubungakanani, umbala unokwenziwa ngokwezifiso.
Ukuba unazo ezinye iimfuno, sinokucebisa okanye siphucule iimveliso zakho.
Ngaba unayo nayiphi na imveliso ehlaziyiweyo?
Ewe. Uhlaziyo lwemveliso lubhengezwe ngencwadi yethu yexesha elithile.
Loluphi uhlobo lwentlawulo oluthathayo?
Sithatha iintlawulo zekhadi letyala (i-Visa, i-Mastercard, i-Discover, kunye ne-American Express). Siphinde sithathe iintlawulo zePayPal.
Zenziwa phi iimveliso zakho?
Ngaba imaski enokulahlwa inokuchasa i-coronavirus?
Le maski inokuthintela i-coronavirus. E-China, abantu abaninzi banxiba imaski enjalo ukuthintela i-coronavirus. Olu hlobo lweemaski lungacoca umoya ongena ngempumlo kunye nomlomo, uthintele ngokufanelekileyo ukuhlasela kweentsholongwane.
Iimaski zonyango zihlala zihlelwa ziimaski zekotoni yecothe, iimaski zonyango, FFP3 okanye iimaski ezingama-N95, kwaye amanqanaba abo okhuselo aqiniswa ngokulandelelana. Imaski yethu yodidi lwesibini kwaye inokufakwa kwizibhedlele.
Andiqondi umohluko phakathi kweFFP3 ne-N95.
I-Kn kunye ne-N kwimodeli yemaski imele imigangatho eyahlukeneyo yesizwe.
Imaski engu-N95, unobumba u-N umele uMgangatho waseMelika, inani lama-95 linqanaba lokhuseleko, kwaye ukusebenza ngempumelelo kokucoca izixhobo zemaski ukuya kumasuntswana kufikelela kuma-95%. "N" ikwathetha ukungahambelani neoyile, ikakhulu ekucoceni kwamasuntswana eoyile, njengothuli, ukungalunganga kwe-asidi, ukungalungi kwemibala, njl.
I-Ffp3 imaski, unobumba i-FFP imele umgangatho wase-Europe, ileta 3 yinqanaba lokhuseleko, kwaye nenqanaba lokukhusela le-ffp3 liphezulu.
Andazi ukuba ezi ntlobo zemaski ziyasuleleka okanye hayi.
Iimaski zonyango zingasetyenziselwa lo gama kungekho kungcoliswa. Ixesha elide likho, ukusebenza kweemaski kuya kuncitshiswa kunye nefuthe lokukhusela liya kuncitshiswa. Kweli xesha likhethekileyo lanamhlanje, ukuba awukwazi ukufumanisa ukuba imaski iphosakele, kuyacetyiswa ukuba uyisuse kube kanye.
Yintoni enye into abayithethayo
Inkqubo yokuba ngumthengisi weVenkile enkulu yeemveliso zeZuoyou ifuna abathengisi ukuba bagcwalise isiVumelwano soMgaqo-nkqubo weNtengiso, umThengisi okanye isiVumelwano sokuThenga soMthengisi, kunye neMvumelwano yokuSebenzisa ngetyala.
Ukufumana ezi fomu, nceda unxibelelane ne alex.wu@wxzuoyou.com. Emva kokugcwalisa ezi fomu, thumela ezi fomu kwi-alex.wu@wxzuoyou.com kunye negama lomnxibelelanisi wakho weZuoyou osebenza kwiakhawunti yakho. Ukuba awunayo i-Zuoyou rep, nceda udwelise uhlobo lweshishini lakho ukuze sikunike elinye.
Emva kokuba wamkelwe kwiVenkile enkulu, uZuoyou uya kuqhagamshelana nawe xa i-akhawunti yakho isetwa ukufumana amaxabiso asezantsi kwiwebhusayithi yethu kunye nokufikelela kwiphepha leMithombo yeLizwe. Iwebhusayithi yethu iqhuba kuphela ikhadi letyala kunye nee-oda zePayPal.
Isihlalo D1, uNo. 8-2, uXinshi Road, iMimandla yeMizi-mveliso, iQianzhou Idolophu, iSixeko saseWuxi, kwiPhondo le Jiangsu, China
UBANI: Bhubhane wesithsaba esitsha sehlabathi ...
Funda malunga nokuthintela ubhubhane, ichanekile ...
Ujongeke kakuhle unxibe imask. Wenze ini...
Global COVID-19 Ubhubhane weSifo
Xa usitya, kuyingozi kakhulu ukubeka ...
© Copyright 2020 Zuoyou. Onke amalungelo agciniwe.